ဖြူဖြူထွေးကို ဆက်လက်ပြီး အားပေးတော့မှာ မဟုတ်ပဲ ငြိမ်းမြတ်သူကိုပဲ ဖြူဖြူထွေးနေရာမှာ အစားထိုးပြီး အားပေး သွားတော့မယ့် ပရိတ်သတ်များ – Cele Cupid
EverBest M | June 27, 2021 | Celebrity | No Comments
အနုပညာ သရုပ်ဆောင် ငြိမ်းမြတ်သူ ဟာ ဆိုရင်တော့ tiktok ပေါ် က နေ လူသိ များလာခဲ့ပြီးသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့တာပါ ၊ စိတ်သဘောထား အလွန်ကောင်းတဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ် … . ။ သူမ က တော့ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေ များတွင် ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ ဓမ္မ ဘက်ကနေ အခိုင် အမာ ရပ် တည်နေတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်ပါ တယ် … . ။
ဖေဖော်ဝါရီ လ ကစ တင်ပြီး နိုင်ငံအတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေမှာဆိုရင်လည်း ငြိမ်းမြတ်သူက ပြည်သူတွေဘက်ကနေ ရပ်တည်ပေးနေတာ ဖြစ်ပြီး အရေးတော် ပုံကြီး အောင်မြင်ရေးအတွက် နိုင်သလောက် ပါဝင်လှုပ်ရှားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ အတွက် ပရိသတ် တွေက ငြိမ်းမြတ်သူရဲ့ သတ္တိရှိမှုတွေကိုလေးစား ဂုဏ်ယူနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ အပြင် နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ အသက်ပေးသွားရတဲ့ နိုင်ငံ့သူရဲကောင်းတွေ အတွက်လည်း ဝမ်းနည်းကြေကွဲကာဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးနေတာလည်း ဖြစ် ပါတယ် … . ။ နောက်ပိုင်းမှာ ဖြူဖြူထွေးနေရာမှာ အစားထိုး အားပေတော့မည့် ပရိတ်သတ်များများပြားလာခဲ့ပါတယ်။ ဖြူဖြုထွေးကို အားပေးအားမြောက်လုပ်နေတဲ့ ပရိတ်သက်တွေဟာ ပြည်သူ ဘက်က ရပ်တည်ပေး နေတဲ့ ငြိမ်းမြတ်သူကိုပဲ အားပေးတော့မှာလား … . ။
အႏုပညာ သ႐ုပ္ေဆာင္ ၿငိမ္းျမတ္သူ ဟာ ဆိုရင္ေတာ့ tiktok ေပၚ က ေန လူသိ မ်ားလာခဲ့ၿပီးသ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာခဲ့တာပါ ၊ စိတ္သေဘာထား အလြန္ေကာင္းတဲ့ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္ … . ။ သူမ က ေတာ့ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေန မ်ားတြင္ ျပည္သူေတြနဲ႔ အတူ ဓမၼ ဘက္ကေန အခိုင္ အမာ ရပ္ တည္ေနတဲ့ အႏုပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ပါ တယ္ … . ။
ေဖေဖာ္ဝါရီ လ ကစ တင္ၿပီး နိုင္ငံအတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနေတြမွာဆိုရင္လည္း ၿငိမ္းျမတ္သူက ျပည္သူေတြဘက္ကေန ရပ္တည္ေပးေနတာ ျဖစ္ၿပီး အေရးေတာ္ ပုံႀကီး ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ နိုင္သေလာက္ ပါဝင္လႈပ္ရွားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ အတြက္ ပရိသတ္ ေတြက ၿငိမ္းျမတ္သူရဲ့ သတၱိရွိမႈေတြကိုေလးစား ဂုဏ္ယူေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့ အျပင္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမွာ အသက္ေပးသြားရတဲ့ နိုင္ငံ့သူရဲေကာင္းေတြ အတြက္လည္း ဝမ္းနည္းေၾကကြဲကာဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးေနတာလည္း ျဖစ္ ပါတယ္ … . ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျဖဴျဖဴေထြးေနရာမွာ အစားထိုး အားေပေတာ့မည့္ ပရိတ္သတ္မ်ားမ်ားျပားလာခဲ့ပါတယ္။ ျဖဴျဖဳေထြးကို အားေပးအားေျမာက္လုပ္ေနတဲ့ ပရိတ္သက္ေတြဟာ ျပည္သူ ဘက္က ရပ္တည္ေပး ေနတဲ့ ၿငိမ္းျမတ္သူကိုပဲ အားေပးေတာ့မွာလား … . ။
အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ ရင်ကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မယ့် လျှို့ဝှက် အလှတရားလေးတွေ ပေါ်လွင်အောင် ဆော့ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး ဖူးပွင့်ခိုင်ရဲ့ အမိုက်စား TIK TOK ဗီဒီယိုလေး
အခါခါ ပြန်ကြည့်ရလောက်အောင် ဆက်ဆီကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ ရွှေမဘုံရဲ့ ဗီဒီယိုလေး..
ကျစ်လစ်သွယ်လျပြီး အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်း အလှတွေ ထင်ရှားလွန်းနေတဲ့ ချောကလျာ